Ampidino SlimBrowser ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (3.90 MB)
SlimBrowser dia manana rafitra tena tsotra raha oharina aminireo mpizaha Internet hafa. Toy izany koa, SlimBrowser, izay manana habe kely kokoa noho ireo mpitety Internet hafa, dia mamela anao hijery Internet aminny fomba haingana sy azo antoka.
Misokatra haingana i SlimBrowser, miaraka aminny tombotsoany aminny maha-programa izay miasa tena tsara aminny Windows.
SlimBrowser, izay misy ny mampiavaka ny mpitety tranonkala maro, dia mamela ny personalization miaraka aminireo safidy natolony anireo mpampiasa azy. Raha tianao, dia azonao atao ny mametraka lohahevitra ao aminny tranokala aminity vokatra ity, toy ny aminny browser Firefox.
Fanamarihana: Raha hampiasa ny Internet browser SlimBrowser aminny fiteny Tiorka, safidio tsotra izao ny fiteny Tiorka ao aminny Interface Language ao aminny fizarana Languages aminilay programa.
Endri-javatra aminny kinova vaovao:
Nampidirina fampidirana miaraka aminny scanner an-tserasera VirusTotal. Raha te hijery ny tranokala ankehitriny dia araho fotsiny ny safidy Tools / Security / Scan miaraka aminny safidinny VirusTotal. Azonao atao koa ny manao izany aminny fipihana ankavanana aminny rohy eo aminny pejy ankehitriny sy aminny fisafidianana ny Scan with VirusTotal.
Nampidirina menio hampisehoana ireo tranonkala notsidihina indrindra. Azonao atao ny miditra aminity menio ity ao aminny fizarana tranokala / tranonkala be mpitsidika indrindra.
Nampidirina menio hijerena ireo tianao fa vao nanampy. Azonao atao ny miditra aminity menio ity avy aminny Favorites / Favorites izay vao nampiana.
Nampidirina menio hampisehoana ireo endrika notsidihina indrindra. Azonao atao ny miditra aminity menio ity avy aminny fizarana Quick form / fampiasa indrindra.
Haben'ny rakitra: 3.90 MB